အဲယားဘတ်စ် - Rikoooo
အဲယားဘတ်စ် A350-1000 XWB CamSim FSX & P3D HOT ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 29 544
Size: 58.4 ကို MB
ဤတွင်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲဘို့အတွက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ် Prepar3D v4 (လည်းသဟဇာတ FSXရှစ် repaints, ကို virtual cockpit နဲ့ထုံးစံအသံနှင့်အတူ) ကိုအဲယားဘတ်စ် A350-1000 ။ ကျွန်တော်တို့ကို A350-1000 မှမိမိတို့မော်ဒယ်အဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ခွင့်ပြုချက်ပေးခြင်းများအတွက် Camille Valiquette (CamSim) အားကျေးဇူးတင်ပါသည် P3D v4 / FSX ဇာတိ format.Repaints အတွက်: Virg ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ Camille Valiquette (CamSim) ကမူရင်းပုံစံ။ များအတွက် native ပြောင်းလဲခြင်း FSX/P3D Rikoooo ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ သောမတ်စ်ရုသဖွငျ့ကို virtual cockpit နဲ့ 330D panel ကို A2NG ။ KelvinMckenzieFlightsim ခြင်းဖြင့်အသံ
ဗြိတိန်လေကြောင်းလိုင်း Landor အတွက်အဲယားဘတ်စ် A320-232 FSX & P3D HOT ဒေါင်းလုပ်
Size: 72.9 ကို MB
အလွန်ကောင်းတဲ့အဲယားဘတ်စ် A320-232 Project မှအဲယားဘတ်စ်အားဖြင့်လုပ်ပါတယ်, ဒီဗူးတစ်ဦး SFCC (slats / ခတ်ကွန်ပျူတာ) တို့ပါဝင်သည်သော Stefan Liebe 2D Panel ကို A32X, ကဲန် Webber အားဖြင့် Pre-configured ပါဝင်သည်အဖြစ် Callouts, တွက်ချက်မှု V1, Auto-မီးတောက်, FMC ပြီးတော့အများကြီးပို။ SkyHigh Simulator ဆီကနေတစ်ခု IAE2500 အသံကဗူးသည် ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ Project မှအဲယားဘတ်စ်, Stefan Liebe, SkyHigh Simulator ဖွငျ့ IAE32 soundpack အားဖြင့် A2500X panel ကိုအားဖြင့်မော်ဒယ်, အထုပ်များနှင့်ကဲန် Webber တို့က repaint
အဲယားဘတ်စ် A310 Multi-Livery FSX & P3D HOT ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 24 187
Size: 87.9 ကို MB
310 liveries နှင့် GE နှင့် PW အင်ဂျင်များအတွက်စစ်မှန်သောအသံနှင့်အတူအဲယားဘတ်စ် A200-300 / 34 / MRTT င်သူတော်ကောင်းတရားဗူး။ သောမတ်စ်ရုသကအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးမော်ဒယ်များနှင့် VC ကို။ FMC, GPWS, မြေပြင်ကိုင်တွယ်မှု, V-မြန်နှုန်းနှင့်လေယာဉ်မှာ Data gauge ပါဝင်သည်။ virtual cockpit နှင့်ပြားမျက်နှာပြင်ကိုတွေ့မြင် (ထူးခြားတဲ့ gauge နှင့်အတူအလွန်ပြည့်စုံနေကြသည် ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ သောမတ်စ်ရုသ်လူး Quintero အားဖြင့်ဗူး, Rikoooo အားဖြင့် repack
အဲယားဘတ်စ် A350-900 XWB Multi Livery Pack ကို FSX & P3D HOT ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 73 225
Size: 328 ကို MB
350 နှင့်အတူအဲယားဘတ်စ် A900-39 XWB ယခု (ailerons, ပြောင်းပြန်, တက်မစသည်တို့) အလုပ်လုပ်ယခင်ဗားရှင်းများတွင်အလုပ်လုပ်မပြုခဲ့သောဤ model အသစ် (FSPainter) animations တွေကိုပေါ် repaints ။ အဆိုပါ A3 အဘို့အဘယ်သူမျှမ 350D အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကို virtual cockpit လည်းမရှိကတည်းကသောမတ်စ်ရုသ၏ A330NG များ၏ယာဉ်အရပျ၌ထားရန်အဆင်ပြေအောင်ပြီးပါပြီ ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ FSPainter နေဖြင့်မူပိုင်ခွင့်© 2018 မော်ဒယ်။ Mees Jansen အားဖြင့် flyable ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ သောမတ်စ်ကရုသဖွငျ့ A330 VC ကို။ T.Marson & ခရစ်အီဗန်အားဖြင့် edited ။ Rikoooo အားဖြင့် Repack နှင့်ပြင်ဆင်ချက်
အဲယားဘတ်စ် A330-200 ဟာဝယေံလေကြောင်းလိုင်း FSX & P3D HOT ဒေါင်းလုပ်
Size: 37.6 ကို MB
ဟာဝယေံလေကြောင်းလိုင်းများ၏အရောင်များ၌ဤအဲယားဘတ်စ် A330-243 အဘို့အပြီးအစီးအထုပ်။ အဲယားဘတ်စ်, FMC, VC နှင့်ထုံးစံအသံများအတွက် GPWS ပါဝင်သည်။ FSX နှင့် P3D သဟဇာတတက် v4.1 + .Hawaiian လေကြောင်းလိုင်းမှဟာဝိုင်ယီအခြေစိုက်ထားတဲ့အမေရိကန်လေကြောင်းလိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဟိုနိုလူလူမှာက၎င်း၏အချက်အချာကနေပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာလေကြောင်းခရီးစဉ်လည်ပတ် ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ ခရစ်အီဗန်အားဖြင့်ထုပ်ပိုး Dominik Stahel, စိတ်တိုင်းကျခြင်းဖြင့်သောမတ်စ်ရုသ် Repaint အားဖြင့်မော်ဒယ်
FSPX အဲယားဘတ်စ် A350-900XWB FSX & P3D HOT ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 77 093
Size: 164 ကို MB
ဤတွင်အသစ်အဲယားဘတ်စ် A350-900 ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးတော်လှန်ရေးသစ်ကိုလေယာဉ်ပျံ။ အဆိုပါမော်ဒယ်နှင့် repaints FSpainter အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးခဲ့ကြသည်။ စံပြအဘို့အ FSpainter မှကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အဆိုပါကို virtual cockpit သောမတ်စ်ရုသထံမှ A330-300 (မရှိအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ A350 VC ကိုလက်ရှိတွင်လည်းမရှိ) ၏ဖြစ်ပါတယ်။ လေယာဉ်ငါ့ကိုအားဖြင့်စုဝေး flyable နှင့်အထုပ်ကိုဖန်ဆင်း ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ FSpainter, သောမတ်စ်ကရုသဖွငျ့ VC ကို, KelvinMckenzieFlightsim ထံမှအသံများကမော်ဒယ် & ပန်းချီ Mees Jansen နေဖြင့်စုဝေး
အဲယားဘတ်စ် A330 Multi-Livery အထုပ် FSX & P3D HOT ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 107 024
Size: 232 ကို MB
ဤသည် VC ကိုအတူသောမတ်စ်ရုသကအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီး A330 & Models ၏ပြီးပြည့်စုံသောအစုအဝေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစုဆောင်းမှု A200 ၏ -200, -300F, -MRTT နှင့် -330 မျိုးကွဲရှိပါတယ်။ Project မှ Opensky ရေးအဖွဲ့အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးအသံအတိုးအကျယ်2မျှ VCThe တပြင်လုံးကို pack ကိုအထွေထွေလျှပ်စစ် CF6-80E1, Pratt & Wh များအတွက်ထုံးစံ soundsets ရှိပါတယ်ထားပါတယ် ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ Project မှ Opensky ရေးအဖွဲ့, သောမတ်စ်ရုသ်လူး Quintero အားဖြင့် repack
JetBlue A320, Mega Pack ကို FSX & P3D HOT ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 35 618
Size: 60.8 ကို MB
ဒီအထူး edition မှာအတူပါဝင်သည် 320 ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်တကွ, အမေရိကန်လေယာဉ် JetBlue Airway ကနေအဲယားဘတ်စ် A17 တစ်ဗူးဖြစ်ပါတယ်။ HD မှာပိုကောင်းသော virtual cockpit ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ, ကိုယ်ပိုင်နှင့်စစ်မှန်သည့်အသံများ, အဲယားဘတ်စ် A321 gauges, add-on Prepard100D နှင့်အတူ 3% သဟဇာတဖြစ်နဲ့ FSX ရေနွေးငွေ့။ တစ်ဦးကစိတ်တော်သင့်ကြောင်းတစ်ဗူး ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ Project မှအဲယားဘတ်စ်, Sean Mooney, Liridon Poliku, သူ Mike Rodriguez အားဖြင့် repack
အဲယားဘတ်စ် A340, Mega အထုပ် Vol 1 FSX & P3D HOT ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 183 251
Size: 140 ကို MB
အရည်အသွေးမြင့်မား၏ကို virtual cockpit နဲ့ 340 repaints နှင့်အတူ (သောမတ်စ်ရုသထံမှ) အားလုံးအဲယားဘတ်စ် A42-XXX ကအပါအဝင်အပြီးအစီးအထုပ်။ CFM56-5C နှင့် (အန်ဒရီဆေးလ်ဗားနှင့် Devyn Silverstein အားဖြင့်) Rolls-Royce Trent 500 ဒီ pack ကိုမူလကလူး Quintero နှင့် SL အားဖြင့်စုဝေးနှင့်တည်းဖြတ်ခဲ့ပါတယ် ... : ဒါ့အပြင်အသံနှစ်မျိုးပါဝင်သည် ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ သောမတ်စ်ရုသ (& သူ့အဖွဲ့), လူး Quintero အားဖြင့်ပက်ကေ့
အဲယားဘတ်စ် A340, Mega အထုပ် Vol2FSX & P3D HOT ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 87 413
Size: 154 ကို MB
အရည်အသွေးမြင့်မား၏စီမံကိန်း Opensky (မျှကို virtual လေယာဉ်မှူးအခန်းကသာ 340D panel ကိုထိန်းချုပ်မှု) နှင့် 200 repaints အားဖြင့်အဲယားဘတ်စ် A340-300 နှင့် A2-45 အပါအဝင်အပြီးအစီးအထုပ်။ အန်ဒရီဆေးလ်ဗားအားဖြင့် CFM အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ CFM56-5C: ဒါ့အပြင်အသံပါရှိသည်။ ဒီ pack ကိုမူလကအနည်းငယ်လူး Quintero ကစုဝေးနှင့်တည်းဖြတ်ခဲ့ပါတယ် ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ လူးဝစ် Quintero, Project မှ Opensky ရေးအဖွဲ့
အဲယားဘတ်စ် A320 မိသားစု, Mega Pack ကို FSX & P3D HOT ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 681 847
Size: 739 ကို MB
ဤတွင်အရည်အသွေးမြင့်၏ 320 repaints နှင့်အတူအဲယားဘတ်စ် A145 မိသားစု၏အကြီးစားဗူးဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည် pack ကိုထုံးစံနှင့်အတူမိသားစု A320 (လေးမော်ဒယ်များ) ၏အပေါငျးတို့သအဲယားဘတ်စ်ထိုကဲ့သို့သောအထူးထုတ်ဝေ V56 (2500) နဲ့တစ်ဦးချင်းစီမော်ဒယ်တစ်ဦးကို virtual cockpit (VC ကို) အတွက် CFM3 နှင့်နိုင်ငံတကာ Aero အင်ဂျင် V3.05.Includes အဖြစ်အသံပါရှိသည် ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ Project မှအဲယားဘတ်စ် & ယင်း၏ပူးပေါင်း, FrançoisDoré, Rikoooo ဖွငျ့လူး Quintero, နောက်ဆုံးသတင်းများအားဖြင့် repack
အဲယားဘတ်စ် A300 Multi-livery, Mega Pack ကို FSX & P3D HOT ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 90 616
Size: 102 ကို MB
ဒီ pack ကိုအောက်ကဇယားမှာစာရင်းအဲယားဘတ်စ် A14-XXX က (-300R, 600F, ST, B600, B1, B2) နှင့်4liveries ၏ 31 မော်ဒယ်များပါဝင်သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုမော်ဒယ်ထုံးစံနှင့်အတူ၎င်း၏ 2d panel ကိုနှင့်ကို virtual လေယာဉ်မှူးအခန်းအဖြစ်အသံဖြစ်ပါတယ်: အ JT6D-80A မဟုတ်အစားထိုးသည့် General Electric CF2-6C50, CF2-9C7 နှင့် Pratt & Whitney JT4D-2R9G59 ( ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ သောမတ်စ်ရုသ & သူ့အဖွဲ့ / ပူးပေါင်း, သူ Mike Maarse အားဖြင့်အသံ, လူးဝစ် Quintero အားဖြင့် repack
အဲယားဘတ်စ် A380-800 VC ကိုပြင်သစ်လေကြောင်း FSX & P3D HOT ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 308 088
Size: 44.7 ကို MB
05 / 05 / 2013 အပေါ်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: ပြင်ဆင်ချက် VC ကို bug တွေနှင့် Rikoooo.Airbus A2 ပြင်သစ်လေကြောင်းအရောင်များအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးနေတဲ့ 380D panel ကိုဖြည့်စွက်, ကပြီးပြည့်စုံဗူးပဲ! တကယ့် A380 နှင့်ထုံးစံအသံအပေါ် အခြေခံ. ကို virtual cockpit ပါဝင်သည်, ဒီဗူးလည်းဒီလိုပါပဲဖန်ခွက် (ကားရှေ့မှနျ) နှင့်ရေဒီယိုနှင့်အတူ bug တွေကိုဖြေရှင်းနိုင်သည်။ ပထမဦးဆုံးအတန်းအစားလေယာဉ် (ဒုတိယ floo ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ Project မှအဲယားဘတ်စ်, repack နှင့် Rikoooo အားဖြင့် 2D Panel ကို, Facked အားဖြင့်မှုတ်သွင်း VC ကိုဆုံးမသော
အဲယားဘတ်စ် A320-214 ဆွစ် FSX & P3D HOT ဒေါင်းလုပ်
Size: 65 ကို MB
ဆွစ်ကုမ္ပဏီ၏အရောင်ထိပ်တန်းအဲယားဘတ်စ် A320, ထုံးစံအသံရှိပါတယ်, ကို default ၏ "ပြုပြင်ထားသော" ကို virtual cockpit ကိုသုံးပါ FSX A321 (A320 အဖြစ်အတူတူပင်) ။ ဒီလေယာဉ်ပျံသည်ကြီး fun.Swiss အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေကြောင်းလိုင်း AG က (တိုတောင်း: ဆွစ်ဇာလန်) စီစဉ်ထားန်ဆောင်မှုများလုပ်ကိုင်ဆွစ်ဇာလန်၏အလံသယ်ဆောင်လေကြောင်းလိုင်းသည် ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ Project မှအဲယားဘတ်စ်, မိုဟာမက်အယ်လ်ခါလီဖာ, Stefan Bree နှင့်အဗ္ဗဒူလာ Rahman ကအားဖြင့် repaints
ပေါ်တူဂီ Pack ကိုအသာပုတ်ပါ FSX & P3D HOT ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 35 425
Size: 65.5 ကို MB
TAP PortugalIn ၏အရောင်များအတွက်အဲယားဘတ်စ် A319, A320, A330 နှင့် A340 (VC ကိုအတူအားလုံး) တို့အပါအဝင်ထိပ်တန်းဗူးများ၏အမျိုးအစားရွေးချယ်ရေး FSX/P3D လေ့ TAP အဖြစ်လူသိများပို့ဆောင်ရေး Aereos ပေါ်တူဂီ, SGPS, SA "ပေါ်တူဂီ Pack ကိုအသာပုတ်" ကိုရွေးချယ်ပါ, ပေါ်တူဂီ၏အမျိုးသားရေးလေကြောင်းလိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပေါ်တူဂီ 100% ပြည်နယ်လိုလားသူဖြစ်တယ် Tap ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ သောမတ်စ်ရုသ, Project မှအဲယားဘတ်စ်